अष्टलक्ष्मी शाक्य माधब नेपालको पार्टी प्रवेशसम्मको तयारीमा, एकाएक के आइलाग्यो त्यस्तो ? – GALAXY
अष्टलक्ष्मी शाक्य माधब नेपालको पार्टी प्रवेशसम्मको तयारीमा, एकाएक के आइलाग्यो त्यस्तो ?
काठमाडौं – प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) को १०औं राष्ट्रिय महाधिवेशन यही मंसिर १० गतेदेखि मंसिर १२ गतेसम्म चितवनको सौरहामा हुँदैछ ।महाधिवेशनको सम्पूर्ण तयारी भैसकेको छ । नेताहरु अहिले चितवन आउने जाने क्रम बढेको छ । पार्टी जीवनमा एमालेले पहिलोपटक विधान महाधिवेशन ललितपुरमा भव्य रुपमा सम्पन्न गरेर सर्वसम्मत् रुपमा विधान पारित गरेर नेतृत्व पनि सर्वसम्मत् नै चयन गर्ने सन्देश दिईसकेको छ ।
नेतृत्वको लागि उपाध्यक्ष भीम बहादुर रावलले अध्यक्ष ओलीसँग प्रतिष्पर्धा गर्ने तयारी थालेका छन्। उनले महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौटको विषयमा पनि प्रश्न उठाएका छन् ।रावलले अध्यक्षमा उठ्ने निधो गर्नुअघि अध्यक्ष ओलीसँग भेटवार्ता गरेका थिए । उक्त भेटवार्ता फलदायी नभएपछि रावल नेतृत्वमा उठ्नेगरि आन्तरिक तयारीमा जुटेका छन् ।